Maitiro ekugadzirisa zviziviso paApple Watch | IPhone nhau
Sezvo imi mese muchiziva, rimwe remabasa makuru eApple Watch kutitadzisa kugara tichitora iyo iPhone muhomwe medu. Kuti uwane izvi, smartwatch, pakati pezvimwe zvinhu, isu icharatidza zvese zviziviso uye tinogona kusangana navo kunyaradzwa kwedu.
Kana iyo Apple Watch ikabatanidzwa ne iPhone yedu neBluetooth kana WiFi, chero chinhu chinotumirwa ku iPhone chinoratidzwa pane yedu wachi. Saka zvichareba chero zvedu iPhone yakavharwa uye wachi yedu iri kusangana neganda redu. Izvo zviziviso zvinoratidzwa, hongu, zvinoenderana nesu uye ndeapi isu atinogadzirisa kuti asvike kwatiri.
Isu tinovhura iyo Apple Tarisa app pane yedu iPhone.
Takatamba pa Zviziviso.
Isu tinoshandisa iyo Notifications Chiratidzo kuona dotani reorenji pamusoro pechiso cheApple Watch patinenge tisina kuziviswa.
Isu tinoshandisa Ziviso Chakavanzika saka iwe unofanirwa kuvabata kuti uone iyo ruzivo rweyezaziso.
Tinya pane Anwendung kubva kuApp Store kugadzirisa zviziviso zveumwe neumwe.
Mamwe mafomu kubva kuApp Store uye mamwe maApplication Apple anotibvumidza isu kusarudza pakati inoratidza mamiriro ezviyeuchidzo zve iPhone yedu kana kudzima zviziviso yeiyo app zvachose. Zvimwe zveApple zvinoshandiswa zvinotipa sarudzo yechitatu inova kurongedza (7). Kana tikasarudza iyi sarudzo, dzimwe sarudzo dzinozoonekwa dziripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekumisikidza zviziviso paApple Watch
Nei mimwe mienzaniso yemitambo ichiuya mumabhokisi akareba uye mamwe mumabhokisi akaenzana ???
Sekuziva kwangu, iyo mitambo inoenda mubhokisi rakareba uye iwo akaenzana ari Tarisa. Izvo zvinoitika ndezvekuti mamwe maWatch ane tambo dzakadai seMutambo.
Sei ndisingakwanise kuona zviwhatsapp zviri pawatch? Nemutumwa hapana dambudziko .... ini ndatoedza zvese ... zvinobatsira
Chinhu chaichoicho chakaitika kwandiri kwevhiki kana zvakadaro, ndisati ndagamuchira notices uye ikozvino kwete.